Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo heshiisyo waa weyn Doha ku gaaray | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo heshiisyo waa weyn Doha ku gaaray
Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo heshiisyo waa weyn Doha ku gaaray
Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar, ayaa ku heshiiyey in Soomaaliya laga teegeero sidii loo furi lahaa dib u heshiisiin Qaran iyo horu wadidda xiriirka labada dal.
Magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar, waxaa ku sugan wefdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha ayaa la kulmay Amiirka dalkaasi Qatar iyo madaxda kale ee waddankaas, waxa ay wada gaareen heshiisyo dhowr ah
Wasiirrada Arrimaha Dibedda Soomaaliya iyo Qatar ayaa shir jaraa’id ku qabtay Doha, iyagoo faah-faahiyey heshiisyada waxa ay ku aaddan yihiin.
Sidoo kale Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu gaarsiiyey dalka Qatar Amiirka dalkaasi dhambaal mahadcelin ah oo la xiriira sida shacabka Soomaaliyeed ugu qanacsan yihiin isla markaana ay mahad uga hayaan taageerada ay ka helaan walaalahood reer Qatar.
Hehisiiyo kale ayaa lagu gaaray magaalada Doha, kuwaas oo ay dhowaan si rasmi ah uga hadli doonaan madaxweynaha iyo masuuliyiinta dalka Qatar.
Dowladda Qatar ayaa soo dhoweysay madaxweynaha iyo wefdigiisa, sheegtayna in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga jawaabi doonaan, arrimo ay ka yihiin gargaarka bini’aadannimo, kaalmooyinka tooska ah ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed loo fidinayo iyo iskaashiga diblomaasiyaddeed ee labada dal.
Previous articleWasaaradda Isgaarsiinta oo soo bandhigtay sahan lagu sameeyay baraha internet-ka ee wasaaradaha
Next articleRa’iisul Wasaaraha Soomaliya oo daah-furey Ollaha bilicda dalka.